नाटकघर खुल्ने छैन छाँटकाँट- कला - कान्तिपुर समाचार
नाटकघर खुल्ने छैन छाँटकाँट
'परिस्थिति राम्रो भयो भने खोल्छौं । अवस्था झन गम्भीर छ । एक वर्षसम्म त गाह्रै पर्छ होला काम गर्नलाई । सामाजिक दूरी कायम गरेर नाटक मञ्चन गर्न भएन । सायद चैत–वैशाखसम्म पनि खोल्न सकिँदैन ।'
आश्विन ३, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — २०७२ को भूकम्पमा काठमाडौंको कालिकास्थानमा रहेको सर्वनाम थियटर करिब १५ दिनका लागि बन्द भयो । त्यसैकारण थियटरका संस्थापक अशेष मल्लको लेखन तथा निर्देशनमा मञ्चन भइरहेको नाटक 'कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ' रद्द गर्नुपर्‍यो । त्यसपछिको नाकाबन्दीमा पनि केही दिनका लागि अशेषले नाटकघर बन्द गरे । तर, कोरोनाका कारण पहिलो पटक लामो समय नाटकघर ठप्प भएको बताउँछन् नाटककार मल्ल ।
कोरोना महामारीले प्रतक्ष असर पारेको क्षेत्र मध्ये एक हो, मनोरञ्जन । ६ महिनादेखि ठप्प हुँदा यो क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ । यो क्षेत्रको पुरानै रुप देख्न सामान्य अवस्था पर्खनुपर्छ । अहिले नै नाटकघर खुल्ने छाँटकाँट देखिँदैन । ३ महिने लकडाउन त्यसपछिका निषेधाज्ञामा विभिन्न क्षेत्रहरु खुले । लामो दूरीका यातायात सवारी साधन पनि सञ्चालनमा आए । तर मनोरञ्जन क्षेत्र खुल्ने/नखुल्ने अझै यकिन भइसकेको छैन ।
त्यसैले पनि अलमलमा पारेको बताउँछन् अशेष । 'सरकारले अझै भेला हुन दिएको छैन । के गर्ने अलमलमा छौं,' उनले भने ।
लकडाउन अगाडि सर्वनाममा २ वटा नाटक तयारी हुँदै थियो । तीन महिने कोर्स सकाएका १६ र १७ औं ब्याचका विद्यार्थीले नाटक तयार पार्दै थिए, कोरोनाले गर्दा त्यो रद्द भयो । नाटकघरले अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभल गर्ने तयारी थियो । १५ देशको सहकार्यमा फेस्टिभल आयोजना गर्ने तयारीमा सुरु भइसकेको थियो । विभिन्न देशका संस्कृतिलाई लिएर नाटक तयार गर्ने अनि विश्वका विभिन्न ठाउँमा देखाउने उदेश्यसहित तयारी अगाडि बढ्यो । फ्रान्सले आयोजना गर्ने भनिएको फेस्टिभलका लागि जर्मनी, भारत र फ्रान्सबाट नाटककार नेपाल आइपुगेको केही दिनमै देशमा कोरोना प्रवेश भयो । त्यसपछि उनीहरु हतार गर्दै आफ्नो देश फर्के ।
कोरोनाकै कारण यो योजना पछाडि धकेलियो । अब सरकारले निषेधाज्ञा खोले पनि तत्काल नाटकघर नखोल्ने बताउँछन् मल्ल । भन्छन्, 'सरकारले भेला गर्न दिए पनि तत्काल थियटर खोल्दैनौं । जोखिम छ । पूरा खुल्ला नभएसम्म हामी खोल्दैनौं । निषेधाज्ञा खोले पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले मैले विद्यार्थीलाई घरमै सिर्जनात्मक क्रियाकलापमा संग्लग्न हुन उत्साह दिएको छु ।'
यसरी लामो समय नाटकघर ठप्प हुँदा धेरै कुरामा असर पारेको उनी बताउँछन् । तर, उनी यो विषम अवस्थामा पनि सकरात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । 'अहिले हाम्रा दर्शक भोकै छन् । यतिबेला नाटकघरले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ त्यतातिर सोच्दै छु । नाटकघर चलेन भनेर छाती पिट्न भएन नि । अब अवस्था सामान्य भएपछि नै गरौंला ।' उनले भने ।
अब केही दिनमै दृश्यांश (मोबाइलबाट सर्ट फिल्म बनाउने प्रतियोगिता) घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेका छन् मल्ल ।
नाटकघर कथा घेरामा लकडाउनअघि जर्ज अर्वेलको 'एनिमल फार्म'मा नाटक बनाउने तयारी चल्दै थियो । नाटककार आकांक्षा कार्कीले उक्त कथालाई नेपालीमा रुपान्तरण गरेकी थिइन् । १५ जनाको कलाकार लिएर तयारी सुरु भइसकेको थियो । उनका अनुसार प्रप्स बनाउन ५० हजार खर्च भयो । तर कोरोनाले गर्दा तयारी सुरु नहुँदै उक्त नाटक बन्द गर्नु पर्‍यो । त्यसदिनदेखि उनको नाटक घर खुलेको छैन ।
नाटकघर खुलिहाले पनि अब यो नाटक गर्न सम्भव नभएको उनी बताउँछिन् । 'थिएटर खुली नै हाल्यो भने त्यो नाटक गर्न सम्भव छैन । किनकी खर्च धेरै छ त्यो नाटकको । त्यो अनुसारले दर्शक पनि नआउलान् । एकदम चलोस् भनेर त्यो नाटक बनाएका थियौं । थोरै खर्च भएको नाटक गर्न सकिएला तर ४/५ लाख खर्च लाग्ने नाटक गरेर जोखिम मोल्न गाह्रो छ,' उनले सुनाइन् ।
उनी अहिले नै नाटकघर खोल्ने मुडमा छैनन् । महामारीबीच उनलाई एउटा कुराले साह्रै पिराेल्यो । नाटकघरमा स्वयंसेवक भइर सहयोग गर्नेहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न नपाउँदा उनलाई अप्ठ्यारो अनुभव भयो । 'काम गरिरहेको बेला कति जनालाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यो नसक्दाखेरि कस्तो लाचार अनुभव हुँदो रहेछ । अरुलाई काम दिन सकिएन भन्नेजस्तो अनुभव भयो,' उनी सुनाउँछिन् ।
महामारीबीच कथा घेराले भर्चुअल सो सुरु गरेको छ । चार महिनादेखि यो सो जुममार्फत आयोजना भइरहेको छ । सोको नाम हो, शून्य घेरा । आकांक्षा नाटक खुल्न अझै १ वर्ष लाग्ने बताउँछिन् ।
त्यस्तै ३ पहिलो चरणको लकडाउनको अन्तिमतिर 'मण्डला' नाटकघरले ‘जुनकिरी घुम्ती रंगमञ्च बस’ लिएर सात प्रदेशमा टुर गर्ने योजना बनाइएको थियो । नाटकघरका टिमलाई लागेको थियो, अब अवस्था सामान्य हुन्छ । तर, सोचेजस्तो भएन । अवस्था बिग्रिँदै गएपछि यो कार्यक्रम पनि पछाडि धकेलिएको बताउँछिन् मण्डला नाटकघरकी अध्यक्ष सिर्जना सुब्बा ।
'सम्भव भएसम्म २/३ दिन यतै नाटक मञ्चन गरेर सात प्रदेशमा टुर जाने तयारी थियो । आन्तरिक तयारीहरु भइरहेको छ । तर परिस्थिति नहेरी केही भन्न सकिन्न,' उनले सुनाइन् ।
महामारीले गर्दा नाटक घरदेखि कलाकारलाई प्रत्यक्ष असर परेको बताउँछिन् सिर्जना । 'असर धेरै नै गर्‍यो । ऋणमा डुबेका छौं, भाडा तिर्नै पर्‍यो । योजनाहरु चौपट भयो । ५ वर्ष पछाडि धकेलियौं हामी । थियटरमा अहिले गाह्रो छ,' उनले समस्याहरु खुलाउँदै गइन्, 'घाटाको हिसाब त गरेर नै सकिन्न । घर भाडामा छुट पनि पाएको छैन । हामी कलाकार कामविहीन छौं ।'
आगामी वैशाखसम्म पनि नाटकघर खोल्ने अवस्था देख्दिनन् उनी । 'परिस्थिति राम्रो भयो भने खोल्छौं । अवस्था झन गम्भीर छ । एक वर्षसम्म त गाह्रै पर्छ होला काम गर्नलाई । सामाजिक दूरी कायम गरेर नाटक मञ्चन गर्न भएन । सायद चैत/वैशाखसम्म पनि खोल्न सकिँदैन,' उनले सुनाइन् ।
कोरोनाकै कारण कुञ्ज नाटकघरका अधिकांश कार्यक्रमलाई पनि असर गर्‍यो । क्रियटिभ राइटिङका कक्षाहरु बन्द छन् । वैशाखमा गर्ने भनिएको भरत नाट्यम पनि पछाडि धकेलियो । म्यानेजर राजु सिंखडा भन्छन्, 'सरकारले थिएटर खुल्न दिएको छैन । सरकारको नीति नियम अनुसार नै चलिरहेका छौं । उहाँहरुले खोल्ने नीति ल्याउनुहुन्छ भने हामी खोल्छौं ।'
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ १४:०८
डा.केसीको जीवनरक्षा गर्दै जायज माग पूरा गर : कांग्रेस
आश्विन ३, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै जुम्लामा अनशनरत डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्दै जायज मागहरु पूरा गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विगतदेखि नै सत्याग्रहमा सरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन एक साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले संवादको कुनै पहल नगरेको भन्दै कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।
०७५ साउन १० गते प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही वर्षको माघमा सरकारले उल्लंघन गरेको नजिर नदोहोर्‍याएर ‘इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयन’ का लागि कांग्रेसले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान देखि राप्ती स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मको माग अघि सारेर अनशनरत डा. केसीसँग संवाद गरेर उनको जीवनलाई जोखिमबाट जोगाउँदै जायज मागहरु पूरा गर्न कांग्रेसले संघीय सरकार र कर्णालीको प्रदेश सरकार दुवैलाई अपिल गरेको छ ।
भर्चुअल प्रदर्शनीमा चित्र